IWholeyile Emdaka Ukucoca iYunithi yeDAF eDityisiweyo uMvelisi kunye noMboneleli |JINLONG
ICandelo le-DAF loNyango lwaManzi amdaka elichithwe iNkqubo yokuNyulwa koMoya
ZYW series Dissolved Air Flotation ikakhulu ukwahlukana okuqinileyo-ulwelo okanye ulwelo-ulwelo.Isixa esikhulu samaqamza amancinci avelisiweyo ngokunyibilika kunye nokukhulula inkqubo abambelela kumasuntswana aqinileyo okanye angamalwelo anoxinaniso olufanayo namanzi amdaka ukwenza yonke into edada ngaphezulu kumphezulu ngaloo ndlela ifezekisa injongo yokwahlulwa kolwelo oluqinileyo okanye ulwelo.
I-DAF inyibilikiswe i-flotation yomoya iquka itanki yokudada, inkqubo yomoya enyibilikileyo, umbhobho we-reflux, umoya okhutshweyo okhutshweyo, i-skimmer (Ngokusekelwe kwiimfuno zabathengi, kukho uhlobo oludityanisiweyo, uhlobo oluhambahambayo kunye nohlobo lweplate yokukhetha.), Ikhabhinethi yombane njalo njalo. .
I-DAF inyibilikiswe ukudada komoya inyibilikisa umoya emanzini kuxinzelelo oluthile lokusebenza.Kwinkqubo, amanzi axinzelelweyo azaliswe ngumoya onyibilikisiweyo kwaye akhutshwe kwisitya se-flotation.Amaqamza omoya emikroskopu aveliswa ngumoya okhutshiweyo ancamathele kwizinto eziqinileyo ezijingayo aze azidada kumphezulu, enze ingubo yodaka.I-scoop isusa udaka olujiyileyo.Ekugqibeleni, ukugqiba uhlambulula amanzi.
Itekhnoloji ye-air flotation ye-DAF inyibilikiswe ukudada komoya idlala indima ebalulekileyo ekwahlukaneni kolwelo oluqinileyo (Kwangaxeshanye nciphisa iCOD, BOD, chroma, njl.njl).Okokuqala, xuba i-ejenti ye-flocculating emanzini akrwada kwaye udibanise kakuhle.Emva kwexesha elisebenzayo logcino (ilebhu imisela ixesha, ithamo kunye nesiphumo se-flocculation), amanzi akrwada angena kwindawo yoqhagamshelwano apho amaqamza omoya amancinci abambelela kwifloc aze aqukuqelele kwindawo yokwahlula.Ngaphantsi kwempembelelo ye-buoyancy, amaqamza amancinci adada iiflocs phezulu, enze ingubo yodaka.Isixhobo se-skimming sisusa i-sludge kwi-sludge hopper.Emva koko amanzi asezantsi acacisiweyo ageleza kwidama lamanzi acocekileyo ngombhobho wokuqokelela.Amanye amanzi ahlaziywa kwitanki yokudada kwisixokelelwano sokunyibilikisa umoya, ngelixa amanye aya kukhutshelwa.
* Susa ioli kunye ne-TSS.
*Yahlula amasuntswana amancinci kunye ne-algae kumanzi aphantsi komhlaba.
*Buyisa iimveliso zexabiso kugutyulo lwemizi-mveliso olufana nentlaka yephepha.
*Yenza njengetanki yesibini yentlenga ukwahlula kunye nokugxila kumasuntswana amisiweyo kunye nodaka.
* Umthamo omkhulu, ukusebenza okuphezulu kunye nendawo encinci yokuhlala.
*Ulwakhiwo olubambeneyo, ukusebenza ngokulula kunye nokugcinwa.
*Ukupheliswa kokwandiswa kwentlenga.
*Ukuphefumlela emanzini ngelixa umoya udadayo, kunesiphumo esicacileyo ekuphelisweni kwearhente esebenzayo kunye nevumba elibi emanzini.Okwangoku, ukunyuka kwe-oksijeni echithweyo kunika imeko efanelekileyo kwinkqubo yokulandelela.
*Inokufikelela esona siphumo silungileyo ekwamkeleni le ndlela xa ulahla amanzi ngobushushu obuphantsi, ubumdaka obuphantsi kunye nobulembu obungaphezulu.
ukuxhela, istatshi, amayeza, ukwenza iphepha, ukuprinta kunye nokudaya, isikhumba kunye nesikhumba, ishishini lepetrochemical, amanzi amdaka asekhaya, njl.
Ngaphambili: Uhlobo lokupakisha iSistim yokucoca amanzi amdaka amdaka
Okulandelayo: Umatshini wokucoca amanzi asetyenzisiweyo kwidrum yokucoca umatshini wokuhluza omncinci
Uthotho lwe-ZYW oluQonxileyo lokuHamba okuLuthe tye Uhlobo loMoya oNyibilikileyo...
ZCF Series Cavitation Flotation Uhlobo lweLindle Dis...
Uthotho lwe-ZSF loMatshini oNyibilikayo oKudadayo woMoya (ve...